Barashada Jirka - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Degmadu waxay uga baahan tahay dhammaan ardayda inay si guul leh u dhammaystiraan laba xilli-dugsiyeedka jir-dhiska: Hal jimicsi iyo hal koorso caafimaad. Koorsooyinkan waa la dhammaystiri karaa inta lagu jiro fasal kasta 9-12. Degmadu waxay aqoonsan tahay inay ku adkaan karto ardayda qaarkood inay qaataan dhammaan koorsooyinka kale ee ay rabaan inay qaataan oo ay buuxiyaan shuruudaha waxbarashada jir-dhiska. Sidaa darteed, ardaydu waxay iska qori karaan waxbarashada jirdhiska ee Tonka Online inta lagu jiro xilliga kuleylaha ama simistar kasta.
Ka dhaafida amaahda Waxbarashada Jirka
Koorsooyinka Waxbarashada Jirka (PDF)
Ardayda ay ku adagtahay inay ku bartaan jadwalkooda jimicsiga oo ay saaran yihiin cashar buuxa oo ah lix dhibic xilli-dugsiyeed kasta waxay dalban karaan ka-dhaafitaan dhibcaha fayoobaanta ee shuruudaha waxbarashada jir-dhiska. Tanaasuliddu waxay u baahan tahay oggolaanshaha hore ee Maamulaha iyo oggolaanshaha ugu dambeeya ee Guddiga Dugsiga. Ka-dhaafitaanku maahan hab kale oo lagu kasbado dhibcaha waxbarashada jir-dhiska; waa ka cafis deynta .5. Ardayga qaata tanaasulka waa inuu qaataa lix fasal inta lagu jiro maalin dugsiyeedka caadiga ah sanad walba ee dugsiga sare. Tani waa imtixaanka aasaasiga ah ee aan loo hayn waqti lagu buuxiyo shuruudaha waxbarashada jirdhiska.
Si loo codsado ka-dhaafitaanka ardaygu waa inuu la kulmaa la-taliyahooda, buuxiyo foomamka saxda ah iyo helitaanka oggolaanshaha Maamulaha intaan la bilaabin ikhtiyaarka jir-dhiska ee la xushay. Dhameystirka ikhtiyaarka jirdhiska jirka ayaa si buuxda loola socon doonaa u hoggaansamida. Arday ahaan loo ansixiyay doorashadan wuxuu dhammeeyaa semesterka labaad ee sannadka sare, dhammaan shuruudaha waxaa hubin doona Maamulaha. Magaca ardayga codsanaya ka-dhaafitaanka ayaa loo gudbin doonaa Guddiga Dugsiga si loo helo ogolaansho kama dambeys ah. Kaliya Gudiga ayaa ugu dambeyn iska dhaafi kara shuruudaha qalinjabinta. Haddii ardaygu sameeyo waxqabad kale oo uusan qaadin xaddiga buuxa ee fasallada, ka-dhaafidda waxaa diidi doona Guddiga Dugsiga. Tani waxay sababi kartaa in ardaygu uusan ku qalin jabin waqtigiisa. Qorshe taxaddar leh oo ku aaddan la kulanka ikhtiyaarkan ayaa loo baahan yahay.
Ardayda ku hawlan koorso adag oo cashar buuxa lehna 24 dhibco muddo afar sano ah waxay dalban karaan ka reebis semesterka labaad ee waxbarashada jimicsiga oo leh shuruudaha soo socda:
Ardaygu wuxuu hayaa cashar buuxa oo ah lix fasal sanadkiiba.
Ardaygu wuxuu kaqeybqaataa oo dhameystiraa waxqabadka cayaaraha Dugsiga Sare ee Minnetonka (oo ay kujiraan isboorti dhexdood ama isboorti intramural ah); ama kaqaybqaato qorshe kale oo jimicsi jir ahaaneed sida Maamuluhu u ansaxiyay.
Waqtiga lagu qaatay kaqeybgalka firfircoonaanta jimicsiga waa inuu u dhigmaa kan fasalka caadiga ee semesterka.
Dhib looma siin doono.
Wax dhibco ah lama siin doono waxqabadka.
Oggolaanshaha hore ee Maamulaha waa in la siiyaa ka hor inta ardaygu ku mashquulin jimicsiga jir dhiska.
Waxqabadka beddelka ah waa la dhammaystiri karaa wakhti kasta inta lagu jiro dugsiga sare.
Oggolaanshaha ka dhaafida waa in loo gudbiyaa Maamulaha ugu dambeyn maalinta ugu dambeysa simistarka koowaad ee sanadka.
Cusbooneysiinta Maskaxda Maskaxda B
Koorso: # 6714
Shuruudaha looga baahan yahay: Hal Fitness Koorso. Looma baahna khibrad yoga ka hor
Koorsadan waxaa loogu talagalay inay ardayda siiso xoog hoose, waayo-aragnimo yareynta culeyska fekerka oo muraayadaha ka dhiga qaar badan oo ka mid ah fasallada istuudiyaha caanka ah ee laga helo naadiyada caafimaadka ee maxalliga ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jidhka Maskaxda Maskaxda B
Qoob ka ciyaarka B
Koorso: # 6716
Fasalada (yada) la bixiyay: 9 -12
Shuruudaha looga baahan yahay: Hal Fitness Koorso.
Koorsadani waxay ardayda siinaysaa fursad ay kaga qaybgalaan oo ay sahamiyaan adduunka qoob-ka-ciyaarka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Dance B
Isku-dhafka jimicsiga jirka A - CUSUB 2020!
Koorso: # 6720
Isku-dhafka Jimicsiga Jirka waa fursad u gaar ah ardayda leh awood kala duwan, heerar iyo sooyaal ah si ay ugu soo wada baxaan isla sinaan iyada oo loo marayo jimicsi socda, isboorti, hogaamin iyo nashaadaadyo caafimaad.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada jimicsiga ee isku dhafan A - CUSUB 2020!
Dibadda Khibrad E
Koorsadani ma fulineyso shuruudaha PE.
Koorso: # 6722
Shuruudaha: Dhamaystiray 1.0 shuruudaha PE
Koorsadan waxaa loogu talagalay inay ardayda siiso fursad ay ku bartaan xirfado kala duwan oo bannaanka iyo madaddaalada ah iyo inay la kulmaan jawiga aan ku nool nahay.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Khibradda Dibadda E
Waxqabadka ugu sarreeya B
Koorsada: # 6718
Shuruudaha looga baahan yahay: Hal Fitness Koorso
Waxqabadka ugu Fiican B waxaa loogu talagalay inay ardayda siiso fursad ay ku xoojiso-tababarida iyadoo la isticmaalayo xarunta qolka culeyska ee Xarunta Pagel.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Waxqabadka ugu sarreeya B
Isboortiga Fit A
Koorso: # 6702
Muhiimadda Isboortiga Fit A waxay ku saabsan tahay nashaadaadka isboortiga iyadoo lagu darayo wadnaha, awoodda, iyo fikradaha dabacsanaanta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isboortiga Fit A
Xoog Fit A
Koorso: # 6704
Fit Fit wuxuu ardayda siin doonaa fursad ay ku bartaan habka jimicsiga iska caabinta ugu horumarsan iyo mabaadi'da tababarka xoogga ku saleysan ee daliilka ku saleysan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xoog Fit A
Kooxda iyo Dual Sports B
Koorso: # 6708
Manhajkan waxaa loogu talagalay inuu sare u qaado xiisaha ardayda ee noocyada kala duwan ee ciyaaraha iyo dhaqdhaqaaqa jirdhiska.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kooxda iyo Dual Sports B
Kooxda iyo Dual Sports II E
Koorso: # 6710
Kooxda iyo Dual Sports II E waxaa loogu talagalay ardayga doonaya inuu kaqeybgalo nashaadaadyo kaladuwan oo koox koox ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kooxda iyo Dual Sports II E
Koorso: # 6700
Muhiimadda ku jirta Isku-darka A wuxuu ku saabsan yahay jirdhiska wadnaha iyo xididdada iyadoo lagu darayo xoog, dabacsanaan, iyo fikradaha isboortiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isku-darka A
Koorso: # 6712
Koorsadani waxay ardayda siinaysaa fursad ay kaga qaybgalaan oo ay ugu raaxaystaan faa'iidooyinka jimicsiga- iyo howlaha ku saleysan wadnaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isku-darka B